Conférence de presse 13 jona 2012 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
14 juin 2012 admin
Ny olana eo amin’ny fitondrana tetezamita, ny olana eo amin’ny lafiny ekonomia sy ny sosialy, ireo no nisongadina tamin’ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety nataon’ny antoko GFFM, notarihin’ny pasitera Mailhol, ny alarobia 13 jona 2012 lasa teo.
Hatramin’izao dia mbola tsy nahazo fankatoavana hatrany ny fitondrana tetezamita, ary tsy mbola nisy fifidianana vita ihany koa. Antony lehibe misakana izay fifidianana izay, hoy ny pasitera Mailhol, ny tsy fahatanterahan’ny “feuille de route”. Isan’ny olana lehibe misakana ny fanatanterahana izay voalaza ao amin’ny “feuille de route” hoy ny pasitera Mailhol ny famelana an’andriamatoa RAVALOMANANA hody eto an-tanindrazana, kanefa raha izay no tanteraka dia mivoaka ny vola avy amin’ny firenena mikambana hanaovana ny fifidianana.
Nasongadin’ny pasitera Mailhol ihany koa ny olana eo amin’ny ekonomia Malagasy. Mihamitombo hatrany hoy izy ny tahan’ny fahantrana, ary mety hiakatra ihany koa ny vidin’ny solika nohon’ny tsy fisian’ny famatsiana ara-bola avy amin’ny fanjakana. Ankoatra izay anefa dia tsy mbola mivaha ny olana eo amin’ny sehatra sosialy satria tsy mbola nivaly ny fangatahan’ireo mpanao fitokonana. Miharihary ihany koa ny tsy fahandriam-pahalemana manerana an’i Madagasikara. Raha te hiady amin’ny asan-dahalo, hoy ny pasitera Mailhol, dia tokony hatsahatra aloha ny fanondranana ireo omby mandritry ny 10 taona eo. Ankoatra izay ihany koa dia tokony hiaraka tsara ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ary ny mpitondra mba hiadiana amin’izay tsy fahandriam-pahalemana izay.
Mahakasika kosa ny fihaonan’ny filohan’ny tetezamita sy Ravalomanana any New York dia nambaran’ny pasitera Mailhol fa fahendrena ny hanatontosana izany aorian’ny 26 jona, ary tokony hotanterahana izay zavatra tapaka amin’io fihaonana io.
Nambarany tamin’izany koa ny fahasarotan’ny fidiran’ny FFKM amin’ny famahana ny olana misy amin’izao fotoana izao satria voalaza mazava ny lalam-panorenana Malagasy fa misaraka tanteraka ny raharaham-piangonana sy ny raharaham-pirenena. Natsidiny tao anatin’izany koa anefa fa tsara raha asiana fotoam-bavaka alohan’ny fivoriana sy asa rehetra eo anivon’ny fanjakana ka ovaina tanteraka ny lalam-panorenana amin’izany.
Raha nanontaniana momban’ilay “Club Satanique” ny pasitera Mailhol dia nolazainy mazava fa tsy sarotra ho an’ny olona mahalala ny bokin’ny Apokalypsy ny mandresy izany satria zavatra efa nisy hatry ny ela izany.
← Ny andinindininy mikasika ny jnja 2012
Fivoriam-be Antananarivo ny sabata 16 jona 2012 →